Barnaamijka Cadaalada ee La wareegida Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Kaabayaasha Dhismaha|Housing|Barnaamijka Cadaaladda La Wareegidda
Barnaamijka Cadaaladda La-wareegista La-wareegida wuxuu siiyaa caawimaad guri-ka-guri mulkiile guri iyadoo la siinayo la-talin guriyeyn oo bilaash ah, kaalmada sharciga madaniga ah, iyo dhexdhexaadinta la-wareegidda la-dagaallanka guryaha. Barnaamijka, oo uu abuuray 2011 Sharciga Cadaaladda La Wareegidda, wuxuu ka caawiyaa milkiileyaasha guryaha iyo amaahda inay sahamiyaan waxyaabo kale oo suurtagal ah oo ku saabsan xayiraadda iyo inay xal gaaraan markasta oo ay suurtagal tahay. Sharciga waxay ubaahantahay amaahiyeyaashu inay kuwargaliyaan mulkiilayaasha guryaha, kahor intaanay bilaabin la wareegida guryaha, helitaanka latalinta la wareegida guryaha iyo suurtogalnimada dhexdhexaadinta, iyo inay kaqaybqaataan dhexdhexaadinta mulkiilayaasha guryaha ee loo gudbiyay Barnaamijka Dhexdhexaadinta. Barnaamijka waxaa lagu maalgeliyaa khidmadaha ay bixiyaan hay'adaha maaliyadeed ee lagu qoro ogeysiisyada iibinta wakiilka ee mulkiilaha deggan guryaha rasmiga ah ee gobolka Washington (qaar ka mid ah hay'adaha maaliyadeed waa laga dhaafay khidmaddaas).
Sanduuqa Kaalmada Mulkiilaha
The Sharciga Qorshaha Samatabbixinta Mareykanka (ARPA) oo ay meel mariyeen Koongareesku bishii Maarso 2021 waxay siisay Washington $ 173 milyan si looga hortago khaladaadka amaahda guryaha iyo dib u dhaca, qaadista guryaha, luminta yutiilitida ama adeegyada tamarta guriga, iyo barakicinta milkiilayaasha guryaha ee la kulma dhibaatooyin ka dib Jan. 21, 2020. Intii lagu jiray kal-fadhigii sharci dejinta ee 2021, Sharci dejintu waxay u idmadeen Ganacsi adeegsiga lacagahaas. Waxbadan ka baro barnaamijka halkan.
Waa maxay hannaanka la-wareegidda guryaha ee Washington?
Washington waa "la-wareegis maxkamadeed oo aan garsoor ahayn", oo macnaheedu yahay in deyn bixiyuhu ku xayiran karo hanti iyada oo loo marayo dhinac saddexaad, wakiilka, oo aan loo marin nidaamka maxkamadda. Wakiilka ayaa leh waajibaad iimaan wanaagsan labada deyn bixiye iyo milkiilaha guriga. Nidaamkan aan garsoorka ahayn waxaa lagu sharaxay Buug-yaraha Barnaamijka Cadaaladda La-wareegista.
Dugsiga Sharciga ee Jaamacadda Seattle, oo kaashanaya Magaalada Seattle, ayaa soo saaray fiidiyow waxbarasho oo sharraxaad dheeri ah ka bixinaya hannaanka kala-wareegista aan sharciga ahayn oo muujinaya sababta ay muhiim ugu tahay milkiileyaasha guryaha inay caawimaad raadsadaan sida ugu dhakhsaha badan.
Riix halkan nooca Isbaanishka.
Sidee milkiilayaasha guryuhu u heli karaan caawimaad?
La xiriir la-taliye guri oo BILAASH AH MARKASTA 1-877-894-HOME (4663).
La-talinta ka-hortagga la-wareegidda guryaha waxaa si bilaash ah loo siiyaa milkiilayaasha guryaha Washington. La taliyayaasha waxaa loo tababaray inay ka caawiyaan milkiilayaasha guryaha inay fahmaan xulashooyinkooda ayna go'aamiyaan habka ugu fiican ee waxqabadka, oo ay ku jiraan u gudbinta Barnaamijka Dhexdhexaadinta haddii ay xaq u leeyihiin dhexdhexaadin.
Milkiilayaasha guryaha ee dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka ah waxay sidoo kale kala xiriiri karaan barnaamijka gargaarka sharciga madaniga ah ee gobolka oo dhan
1-800-606-4819 ama booqasho www.nwjustice.org/get-legal-help.
Waa maxay Dhex-dhexaadinta La Wareegidda Ganacsi?
Dhexdhexaadinta la wareegida heshiisku waa geedi socod dhinac saddexaad oo dhexdhexaad ah ("dhexdhexaadiyuhu") uu ka caawiyo milkiilaha guriga ("amaahda") iyo amaahda ("ka-faa'iideystaha") si furan oo wada hadal ah oo loo gaadho heshiis cadaalad ah, ikhtiyaari ah, iyo gorgortan ah markasta oo ay suurtogal tahay Mulkiilaha guriga leh iyo amaahiyuhu mid waliba wuxuu bixiyaa kala bar khidmadda dhexdhexaadinta si loo diyaariyo, loo jadwaliyo, loona sameeyo kalfadhi dhexdhexaadin ah. Haddii in ka badan hal kalfadhi loo baahdo, lacag dheeraad ah ayaa la codsan karaa.
Ayaa uqalma inuu kaqeyb galo barnaamijka dhexdhexaadinta?
Milkiileyaasha guryaha waxay xaq u lahaan karaan dhexdhexaadin haddii ay ka helaan Ogeysiis Ku-talagalkii deyn bixiyuhu oo ay ku noolaayeen guriga markii howsha la-wareejinta la bilaabay. U gudbinta dhexdhexaadinta waa in loo gudbiyaa Waaxda Ganacsiga ka dib marka la soo saaro Ogaysiiska Ku-dallaca oo aan ka dambayn 20 maalmood ka dib taariikhda Ogaysiiska Wakiilka Iibinta lagu diiwaangeliyey degmada ay hantidu ku taal. Deyn-bixiyeyaasha qaarkood waa laga dhaafay dhexdhexaadinta. Dib u eeg Shuruudaha Xaq u yeelashada macluumaad faahfaahsan.
Sidee dhexdhexaadinta loo codsadaa?
Milkiileyaasha guryuhu iskood iskama gudbin karaan Barnaamijka Dhexdhexaadinta. Milkiileyaasha guryaha waxaa KELIYA loo diri karaa dhexdhexaadinta la-wareegidda guryaha ee lataliyaha guryaha ama qareen. La-taliyaha ama qareenka ayaa sameyn doona go'aaminta u-qalmitaanka waxaana laga yaabaa inuu milkiilaha guriga u diro Waaxda Ganacsiga (Ganacsiga) dhexdhexaadin la-wareegis ah. Milkiileyaasha guryaha ee u qalma waxaa loo xilsaarayaa dhexdhexaadiye (Ganacsi) si ay u fuliyaan howsha dhexdhexaadinta la wareegida guryaha ee lagu aasaasay qaynuun. In kasta oo aan loo baahnayn, milkiilayaasha guryuhu waxay ka faa'iideysan karaan la-taliye ama qareen caawinaya / matalaya iyaga inta lagu jiro hawsha dhexdhexaadinta iyo kal-fadhiyada. Ugu yaraan hal qareen ayaa caadi ahaan matala amaahda. La xiriir la-taliye guri oo BILAASH AH MARKASTA 1-877-894-HOME (4663).
Maxaa dhacaya haddii heshiis la waayo dhexdhexaadinta ka dib?
Dhexdhexaadinta ka dib, dhexdhexaadiyuhu wuxuu u diri doonaa warbixin qoraal ah ("shahaadada") mulkiilaha guriga, amaahiyaha, wakiilka, iyo Waaxda Ganacsiga. Marka dhexdhexaadiyuhu soo saaro oo uu diro shahaadadooda, hawsha dhexdhexaadinta la-wareegidda guryaha waa la dhammaystiray. Haddii amaahiyaha iyo amaahiyuhu ayna heshiis gaarin, shahaadada dhexdhexaadiyaha ayaa u oggolaanaysa ka-faa'iideystaha inuu horay ugu sii socdo hannaanka la-wareegidda guryaha, oo ay ka mid noqon karaan iibinta guriga iibiyaha wakiilka ah (eeg RCW 61.24.163 (13)). Deyn-bixiyeyaashu waxay yeelan karaan fursado yar oo ay tixgeliyaan. Wixii macluumaad dheeraad ah, akhri Fursadaha Amaahda Dhexdhexaadinta Kadib.
Kheyraadka Mulkiilaha guriga
Wax ka baro hannaanka la wareegida guryaha ee Gobolka Washington (video)
Akhriso buug-yaraha Barnaamijka Cadaaladda La Wareegidda (PDF)
Soo ogow inaad xaq u leedahay dhexdhexaadin (PDF)
Raadi la-taliye guri oo ku yaal aaggaaga (website)
Raadi la-taliye guri oo ay ansixisay HUD (website)
Soo gudbi cabasho ku saabsan la-taliye guri (website)
Hel caawimaad sharci (website)
Dib-u-eeg ku samee hababka ugu wanaagsan ee Mashruuca Caddaaladda Waqooyi-galbeed ee matalaadda amaahda ee dhexdhexaadinta la-wareegidda heshiiska (PDF)
Baro waxa ku saabsan xulashooyinkaaga haddii dhexdhexaadintaadu ku dhammaato wax heshiis ah (PDF)
Akhriso Sharciga Cadaaladda La Wareegidda (Sharciga Aminta) (website)
Wax ka baro barnaamijyada kaalmada la-wareegidda guryaha (website)
Qaamuuska ereyada la wareegida guryaha (PDF)
Soo ogow waxa la sameeyo haddii aad soo daahdo ama aadan bixin karin lacagaha (website)
Hel ka-qaadista la-wareegidda guryaha iyo deynta guryaha, iyo macluumaadka been-abuurka ah (website)
Ka fogow khayaanada iyo wax isdabamarinta amaahda guriga (website)
Baro wax ku saabsan dacwad ku oogista amaahda amaahda amaahda (website)
Akhriso Waaxda Hay'adaha Maaliyadeed 'Tilmaamaha Deymaha Guryaha (PDF)
Udira cabashada macaamiisha Xafiiska Xeer Ilaaliyaha Guud (website)
Akhriso Hagaha Kheyraadka Ka Hortagga Ka Hortagga Washington (PDF)
Tilmaamaha Barnaamijka iyo Hawsha
Tilmaamaha Barnaamijka (PDF)
Jadwalka Dhexdhexaadinta La Wareegidda (PDF)
Fursadaha Amaahda Dhexdhexaadinta Kadib (PDF)
Foomka Cabashada Dhexdhexaadiyaha (Erey)
Foomka Cabashada La-Taliyaha Guryaha (shabakad)
Warbixinta Dhexdhexaadinta / Foomka Shahaadada (PDF)
Sida Loo Buuxiyo Foomka Shahaadada (PDF)
Foomka Jadwalka Dhexdhexaadinta (Erey)
RCW 61.24.163 - Barnaamijka Dhex dhexaadinta La Wareegidda (shabakad)
Ma xiiseyneysaa noqoshada dhexdhexaadiye FFA? (PDF)
U gudbinta Foomka Dhexdhexaadinta iyo Tilmaamaha (Erey)
Shuruudaha U-qalmitaanka iyo Tilmaanta Gudbinta (PDF)
Hay'adaha Maaliyadeed ee Ka Dhaafay Dhexdhexaadinta (PDF)
Mashruuca ugu Wanaagsan ee Mashruuca Caddaaladda Waqooyi-galbeed ee matalaadda amaahdayaasha ee dhex-dhexaadinta La-wareegidda Hubka (PDF)
Hay'adihii laga reebay Liiska Dhexdhexaadinta (PDF)
Ogeysiiska Dib U Deynta Amaahda ee Qaababka Kala-iibsiga Kahor La-wareegidda - Ingiriisiga (Erey)
Ogeysiisyada Dib U Laagista Amaahda ee Xulashooyinka Ka-Hortagida - Isbaanish (Erey)
Ka Dhaafida Naqshad Lacageed (Erey)
Ka dhaafida Mawduuca Dhexdhexaadinta (Erey)
Ka dhaafida Dhexdhexaadinta iyo Foomka Lacagta (Erey)
Tilmaamaha Cafiska - WAQTIGA 2020 (PDF)
Hay'adaha Maaliyadeed ee Lacagta laga dhaafay (PDF)
Foomka iyo Tilmaamaha Warbixinta Ka-faa'iideystayaasha (Erey)
Tilmaamaha Wareejinta Lacagaha Elektarooniga ah (PDF)
Ogeysiiska Qaababka Kala-iibsiga Kahor La-Wareejinta (Erey)
Tababbarka La Wareegidda iyo Dhacdooyinka
Noofambar 2015 Dhammaan Ka-Hortagidda Dhexdhexaadiyaha Qalabka Dhacdooyinka
Soo Bandhigida Shirka Daneeyayaasha FFA 2015 (PDF)
2015 FFA Qoraalada Sumeeyeyaasha (PDF)
“Barnaamijku Wuxuu Caawinayaa Qoysaska Magaalada-Saddex-geesoodka Ah Inay Ka Fogaadaan Guryahooda,” Kristi Pihl, Tri-City Herald (shabakad)
“Cadaaladda La Wareegista Cadaaladdu Waxay Sameyneysaa Farqi,” Wakiilka Gobolka Tina Orwall, Kent Reporter (shabakad)
Waxqabadka Barnaamijka iyo Cusbooneysiinta
QORAALKA ESHB 1108 Kooban (PDF)
Soo gudbi Sheeko Guul cadaalad ah La-wareegida